Yini okufanele ngiyinake ekuhambeni kwebusika kwefasitela le-PVC ebusika? - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Yini okufanele ngiyinake ekuhambeni kwebusika kwefasitela le-PVC ebusika?
Hlela: UDenny　2019-12-19　Iselula
Ngenxa yezimpawu ezibonakalayo zokwanda okushisayo nokwenziwa kongqimba kwehhovisi le-PVC, amakhasimende amaningi abika ukuthi phansi ngokuvamile kuvame ukungalingani lapho kubhangqiwe ebusika. Eqinisweni, lokhu akuyona inkinga enkulu. Uma nje unaka, phansi kwehhovisi le-PVC kungabekwa kalula ngisho nasebusika. Lokhu okulandelayo kususelwa ekuhlangenwe nakho kokubhanqwa kweqembu lokwakha, futhi ngizokwabelana nawe phansi kwePVC ebusika.
Okokuqala, naka ukufakelwa phansi phansi ngesikhathi sokufakwa
Lapho usebenzisa i-PVC office flooring, abathengi kufanele banake ukushisa kancane phansi naphansi. Ngesikhathi sokufakwa, izinga lokushisa elingaphansi komhlaba kufanele ligcinwe cishe ngo-18 ° C. Ngaphambi kokufakwa, isitezi sikakhonkolo kufanele sishiswe kancane kancane ngo-5 ° C nsuku zonke size sifike ezingeni lika-18 ° C. Ezinsukwini ezi-3 zokuqala ngemuva kokufakwa kuqediwe, kuyadingeka ukuqhubeka nokugcina lokhu kufudumele .. Ngemuva kwezinsuku ezi-3, izinga lokushisa lingakhuphuka njengoba kudingeka, futhi izinga lokushisa lingakhuphuka ngo-5 ° C ngosuku.
Okwesibili, naka ukufudumeza igxathu negxathu
Sebenzisa ukufudumeza kwe-geothermal okokuqala, unake ukushisa kancane. Lapho usebenzisa okokuqala, izinsuku zokuqala ezintathu zokushisa kufanele zenyuse izinga lokushisa kancane kancane: izinga lokushisa lamanzi lokuqala liyi-18 ℃, usuku lwesibili luyi-25 ℃, usuku lwesithathu luyi-30 ℃, bese usuku lwesine lungavuselwa emazingeni okushisa ajwayelekile, okuwukuthi, izinga lokushisa lamanzi liyi-45 ℃ futhi izinga lokushisa elingaphezulu lingama-28 ℃ ～ 30 ℃. Ungafudumali ngokushesha okukhulu. Uma kushesha kakhulu, iphansi lehhovisi le-PVC lingaqhekeka futhi lisonteke ngenxa yokwanda.
3. Izophinda isetshenziswe futhi ngemuva kwesikhathi eside, futhi ukufudumeza kufanele futhi kwenziwe ngesinyathelo ngesinyathelo .. Lapho uhlelo lokushisa lwe-geothermal luphinde lusetshenziswe futhi ngemuva kwesikhathi eside, izinga lokushisa kufanele liphakanyiswe ngokuqinile ngohlelo lokushisa.
Okwesine, izinga lokushisa elingaphansi komhlaba akufanele libe likhulu kakhulu
Kumele kuqashelwe ukuthi uma usebenzisa ukushisa kwe-geothermal, izinga lokushisa elingaphezulu komhlaba akufanele libe ngaphezu kwama-28 ° C, futhi izinga lokushisa lamapayipi amanzi akufanele lidlule ku-45 ° C. Uma izinga lokushisa selidluliwe, lizothinta impilo yensizakalo nempilo yenkonzo yamaphasi wehhovisi le-PVC. Umndeni ojwayelekile uthokomele ebusika lapho izinga lokushisa lekamelo lifinyelela cishe kuma-22 ° C. Ukushisa okujwayelekile ngeke kuthinte ukusetshenziswa komhlaba ophansi.
Yini okufanele ngiyinake ekuhambeni kwebusika kwefasitela le-PVC ebusika? Okuqukethwe okuhlobene
Qala ulinganise izinga lokushisa lomhlaba esakhiweni sezokwakha. Uma lingaphansi kuka-10 ° C, akukho ukwakhiwa okungenziwa; amahora angu-12 ngaphambi nangemva kokwakhiwa, izinyathelo zokusiza eziding...
Ungahlanza kanjani tile phansi futhi kukhanya: amathiphu wokuhlanza nsuku zonke